Fennel tii: Kedu uru ya bara? Wetuo obi? Ọ na-eme gị ihi ụra? Olee otú ime?
Alimentos	 31 December 2018
Maka ndị na-achọ tii, tii fennel bụ mgbe niile nnukwu nhọrọ. Na mgbakwunye ịbụ ihe na-atọ ụtọ, fennel nwere ihe magburu onwe ya maka ahụike na ọdịmma ndị mmadụ. Ya mere, a na-atụ aro ya maka nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ehihie.
N'isiokwu ndị a, ị ga-amụta ihe niile ịchọrọ gbasara fennel tea. Uru, otu esi eme ya, ọ bụrụ na ọ na - arụ ọrụ dị ka ihe dị jụụ na ozi ndị ọzọ dị mkpa gbasara mmanya a na - atọ ụtọ. Lelee!
Olee uru nke fennel tii?
Fennel tii nwere ọtụtụ uru. Ihe doro anya bụ na ọ bụ ezigbo ihe na-enye nri, dị ka ferro, zinc, calcium, vitamin A, B mgbagwoju anya, C, E wezụga eriri.
Okwu nke eriri ahụ na-emekwa ka fennel tii dị ukwuu maka sistemu nri nri. Ọ na - edozi eriri afọ ma mee ka akụkụ a dị mkpa nke ahụ mmadụ rụọ ọrụ ọfụma.
Fennel tii dị ukwuu maka ndị na-ata ahụhụ ihe mgbu nke nwanyị, na mgbakwunye na inwe nsogbu iku ume, ísì ọjọọ na ịdị mma maka ahụike nke anya na ọbụnadị obi.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ na fennel tii na-alụ ọgụ maka ihe a na-akpọ free radicals, nke na-akpata ịka nká, cell oxidation, ụdị ọrịa kansa, ọrịa Alzheimer na ọbụna ọrịa strok.
Nakwa maka nwa?
Mụaka ruru ọnwa isii ka a ga-enye mmiri ara ara, naanị nke ahụ dị mkpa ka ha nwee ezigbo nri niile, ọgwụ mgbochi, mmiri ọgwụ, na nkenke, ihe niile ha chọrọ ka ha biri nke ọma ma nwekwa ahụike.
Mgbe oge a gasị, nwa ahụ nwere ike ịga n'ihu na mmiri ara ara, nwere ike idobe mmiri ara nne ya na nri ndị ọzọ, ma ọ bụ ịkwụsị ịkwụsị ara ya ma jiri nwayọọ nwayọọ gbanwee n'ụdị nri ọzọ.
Na nke abụọ a, nwa ahụ nwere ike ị drinkụ tii fennel, ma ọ bụrụ na pediatrician na-enye ohere iji ihe a. Tii a di nma maka umuaka nwere colic, nke a na-ahukari n'ime afo mbu nke ndu. Ọ bụ ezigbo ọgwụgwọ ọbụlagodi nsogbu a, nke sayensị gosipụtara nke ukwuu na ọ ga-akwụsị ihe mgbu ahụ.
Gịnị bụ fennel tii na chamomile maka?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ izuike, ọdịghị ihe dị mma karịa ịgwakọta camomile ya na fennel. Iji mechaa ma gbanwee tii n'ime "Ezigbo abalị, Cinderella", tinye naanị mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, nke bụ ụra ehihie.
Nnukwu nhọrọ tii ị ga-a drinkụ n'abalị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ehighị ụra ma ọ bụ nsogbu ihi ụra. Ọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Ọ na-eme gị ihi ụra?
The fennel tii bụ a nwayọọ tranquilizer, ọ dịghị eme ka ị na-ero ụra, ma ọ na-enyere gị aka inwe ahụ iru ala. Naanị ma ọ bụrụ na ịgwakọta ahịhịa na osisi ụra ndị ọzọ na-ehi ụra, dị ka chamomile ma ọ bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, ị ga-ehi ụra, ma ya onwe ya, na-eme ka obi dajụọ gị, mana ụra bụ naanị ụfọdụ ndị.
Esi kwadebe fennel tii?
Ihe kachasị mma maka tii ọ bụla bụ iji ahịhịa ọhụrụ, zụta na ụlọ ahịa pụrụ iche ma ọ bụ ọbụna na ndị na-ere osisi. Agbanyeghị, ọ nwere ike bụrụ na n’obodo gị naanị gị nwere mkpụrụ akọrọ, ọ nwere ike ịbụ kwa, ọ bụ ezie na nke ọhụrụ ka mma.
Iji kwadebe tii fennel, ị ga-esi mmiri mmiri otu lita wee tinye ngaji atọ nke mkpụrụ osisi fennel, ee, ejiri mkpụrụ ya mee ya. Gbanyụọ ọkụ ahụ, kpuchie pan ahụ, hapụ ya ka ọ kwụrụ minit ise, kpoo ya ma jee ozi ma ọ bụ tinye ya na friji. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịtọ ya ụtọ, ọ bụ ezie na ọ kachasị mma iwere ya na-enweghị ihe ụtọ ọ bụla.
Cinnamon ọ na-adị gịrịgịrị?
Ma cinnamon na fennel bụ osisi na-egbochi antioxidant, ya bụ, ha na-enyere aka rụọ ọrụ ahụ niile ma wepu nsị. Nke a ga-enyere gị aka ghara ibu ibu, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ na usoro nri niile na urinary, na mkpochapu abụba na-achọghị, nnu, shuga na carbohydrates.
Nri fennel ọ na-atọ ụtọ?
Ee, fennel na-adị jụụ, mana ọ bụ n'ụzọ dị oke mfe. Ọ dịghị ka chamomile ma ọ bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, mana ọ nwere ọrụ dị jụụ.
Ọ bụrụ na ederede a masịrị gị gbasara fennel tii, kesaa ya na netwọkụ mmekọrịta gị!
Picão tii: Gịnị ka ọ bụ? I tufuo ibu? Esi kwadebe?
Mustgha China: have nwere ya? Chọpụta otu esi tufuo ya ma nwee akpụkpọ zuru oke!